Sida loo Beddelaan AVCHD in AVI on Windows / Mac OS
AVI u taagan tahay Audio Video daraa oo ay tahay mid ka mid ah qaababka ugu fiican in waxa taageeray OS kala duwan iyo dhufto ee ah in la soo saarayo ama la soo saaray dunida oo dhan. Waxaa loo sameeyay sanadkii 1992 iyo sabab la mid ah waa mid ka mid ah kuwa ugu dhaqanka iyo encoder dhab ah multimedia oo la hubiyo in adeegyada ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah.
Qeybta 1: 2 sababaha diinta AVCHD in AVI
Qeybta 2: Sida loo badalo AVCHD in avi fudud ugu dhaqsiyaha badan ku Win / Mac
Qeybta 3: Sida loo doorto goob xaq u AVI?
Sida lagu Xusi, ka hor iyo weliba in faa'iidooyinka AVI yihiin kuwa taas oo horseedaysa user dhinaca xaqiiqda ah in qaab AVCHD waa in diinta si ay u hubiyaan in sida ugu fiican ee lagu helay wakhti ma gudahood oo dhan. Marka laga reebo faa'idooyinka sababaha caadiga ah waa in qaab AVCHD helo meel bannaan oo dheeraad ah iyo in ka badan marka la barbar dhigo qaab AVI iyo qaabka AVI sidoo kale waa u fududahay inuu u ciyaaro marka ay timaado ciyaartoyda iyo barnaamijyada kale ee software ah ku sifayn la mid ah. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in kuwa soo socda 2 sababo adag ayaa sidoo kale loo arko ka hor inta aan qoto dheer dhexgalin mawduuca.
Qaab AVI ayaa la soo saaray iyadoo Microsoft iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in inta badan dadka isticmaala ay adduunka oo dhan isticmaali OS Windows si loo hubiyo in hawlaha la fuliyaa fudayd iyo qanacsanaanta iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la xuso in user ka heli doonaa oo keliya ma aha waxa ay sahlan tahay in la hubiyo in arrinta la xalin laakiin sidoo kale hubin doona in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user sida madal-daaqadaha aan ahayn ayaa sidoo kale taageeri doonaa codec ee arrintan la xiriira.
Qaab AVI sidoo kale waxa loo arki karaa il furan sabab u ahaa xaqiiqada ah in uu u ciyaaro qaab sida ku OS wax ma jiraan shuruudo gaar ah oo user hubin karaa in qaab ay si toos ah u ciyaaray wareejisaa OS iyo mishiinka sida ma hardware gaar ah ayaa loo baahan yahay sidoo kale. Waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican si ay u hubiyaan in qaab AVI la doortay beddelidda ee qaab AVCHD ee arrintan la xiriira. Waxaa hubaal ka dhigaysa nolosha user iyo sidoo kale hab fudud ka badan xitaa.
Waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si ay u hubiyaan in qaab aan la taageeray oo kaliya laakiin files AVCHD ayaa waxaa sidoo kale ku badaley wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in Wondershare Video Convertor Ultimate waa barnaamijka ugu wanaagsan ee suuqa sida ay u fududahay in la isticmaalo iyo hubiyaa in user helo faa'iido Added ee gobolka barnaamijka fanka oo aan dib u dhac badan iyo barnaamijka Sababtan awgeed si weyn lagu talinayaa in user kasta oo loo isticmaali karaa si fudud oo ku qanacsan. Geedi socodka la xiriira in ay tahay in la raaco ayaa lagu sharaxayaa sida under:
1. user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html waxaa browsed si loo hubiyo in barnaamijka la geliyo oo bilaabay hab sax ah:
2. video AVCHD waa ka dibna in la raran yihiin si loo hubiyo in ay u muuqato in shaashadda weyn oo ay sidoo kale waxaa la samayn karaa iyadoo la kaashanayo badhanka dar files ku yaalla shaashada ku xusan:
3. Laga bilaabo guddiga xaq user ay u baahan tahay in ay doortaan qaab AVI in ay sii wadi dheeraad ah ee arrintan la xiriira:
4. button diinta waa ka dibna in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka halkan hasa
Kuwa soo socda waa goobaha ugu muhiimsan AVI marka ay timaado HD TV iyo qalabka ay ku sifayn mid ah:
Heerka jir waa 25 fps marka ay timaado Pal videos iyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in qaabab horumar waa la doortay ee heerka this. Waayo, kulli waxay ku qaabab oo isdhaafsan heerka fps aadayo ilaa 5.
Heerka jir ee NTSC waa 30 fps iyo qaabab horusocod sidoo kale u isticmaali heerka isku si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo oo marka ay timaado qaabab oo isdhaafsan heerka dhaco ilaa 60 fps.
Qaab AVCHD ma aha in si weyn loo isticmaalo iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in qaab waa caan oo ma natiijada hesho sida ugu jecel yahay iyo baahida loo qabo in isticmaalaha. Waxa kale oo ay tahay in la xusay in tirada dadka isticmaalaya oo hubin in ay ka heli kaamirada ka dhigi waa mid aad u xadidan oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in dadka jeclaan lahaa inuu u ciyaaro qaabab ku dhufto ee kale ee markaas u baahnaan doontaa inaad yahay loo hubiyo in baakad codec rakiban yihiin laakiin habkan ayaa sidoo kale waxaa ka buuxda ka kaaftoomi oo sidaas daraaddeed waa inuusan marna lagu talinayaa in arrintan la xiriira. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay qaataan hab aan kaliya lagu dabaqi karo laakiin sidoo kale waa ay fududahay in la raaco si loo hubiyo in user helo natiijada la doonayo wakhti gudaha iyo sidoo kale ugu fiican nidaamka iyo ka arki kartaa sawirada qaab AVCHD wax waqti ah gudahood at dhan. Waxaa jira sababo badan si ay u hubiyaan in AVCHD ah waxaa loo baddalaa qaab AVI iyo sababaha kuwaas oo sidoo kale waxa loo arki karaa faa'iidooyinka AVI. Waxay faa'iidooyinka qaab AVI sidoo kale iftiiminaya user ee arrintan la xiriira si loo hubiyo in haddii ay jirto waqti soo socda waxay ogaan oo qaab ay tahay in la doortay si ay u hubiyaan in ugu wanaagsan ee la helay arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in qaab AVI la isticmaalo daaqadaha sida kale ee loo arki karaa qaab default daaqado ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab AVCHD waa qaab kale waasac taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u isticmaala.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVCHD in AVI on Windows / Mac OS